MUUQAAL: X/ Dhulbahante ee DF-Soomaaliya oo si kulul uga hadlay Boobka Kuraasta Gobolada WAQOOYI ! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO MUUQAAL: X/ Dhulbahante ee DF-Soomaaliya oo si kulul uga hadlay Boobka Kuraasta Gobolada WAQOOYI !
MUUQAAL: X/ Dhulbahante ee DF-Soomaaliya oo si kulul uga hadlay Boobka Kuraasta Gobolada WAQOOYI !
Jan 03, 2017MAQAALO, MUUQAAL
Xildhibaanada Labada Aqal ee kasoo Jeeda Gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa magaalada Muqdisho Ku yeeshay Kulankoodii ugu horeeyay, waxayan siwayn uga hadleen Kuraasta ku Maqan dhanka gobolada Dir waqooyi ee Soomaaliland.
Xildhibaan Axmed Jaamac jangeli iyo Xildhibaanad Siciido, ayagoo sheegay in arintan in badan jiitamaysay.
Xildhibaanad Canab Xassan yare ayaa si kulul uga hadashay, waxayna sheegtay in sadexda Xildhibaan ee ku maqan Dir waqooyi laga rabo inay keenaan ma sidaas u xanibnaan doonaan oo la laalo, waxay ka digtay inaan dib loo dhici doonin Xuquuqda dadkan SSC, ayna u taagan yihiin.
Canab oo ahayd qofkii ugu hadalka adkaa, ayaa sheegtay in gobolada SSC ay shilalkeey is dhigeen lagu qalay, waxoodiina lagu kala daray laba maamul .
Dowladaan Xasan sheeq uu hogaamiyo ayaa waxaa lagu dulmiyay Hawiye iyo Dhulbahante.
MUUQAAL HALKAAN HOOSE KADAAWO
Previous PostMucaaradka la kala wato ee Suuriya oo ku hanjabay inay heshiiska ka baxayaan!! Next PostSawirro kii dadka ku Laayay Turkiga oo lasoo bandhigay & Dalalka ay ka soo jeedaan Dadkii dhintay (daawo)!